၁၆:၀၉၊ ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ နေ့က Mayor mt (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) တည်းဖြတ်သည့်မူ
အပင်သည် အပင် လောက(Plantae kingdom) တွင်ပါတွင်သော သက်ရှိ (living) ရုပ်စု (organism) ဖြစ်သည်။ အပင်များတွင် တွေ့နေကြ ရုပ်စုများဖြစ်သော သစ်ပင် (tree)၊ ရိုးပျော့ပင် (herb)၊ ချုံပုပ် (bush)၊ မြက်၊ နွယ်ပင်၊ မှို၊ ရေညှိ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ လက်ရှိ သိသမျှမှာ အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၅၀,၀၀၀ ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၄-ခုနှစ်က ဆိုလျှင် ၂၈၇,၆၅၅ သာ သိခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ metaphytes သို့ viridiplantae (အစိမ်းရောင် အပင်များ) သည် သူတို့၏ စွမ်းအင်များကို နေရောင်ခြည်မှ ရယူပြီး ၎င်းကို ဖိုတိုစင်းသစ်စစ် ဟုခေါ်သည်။
↑ Haeckel G (1866)။ Generale Morphologie der Organismen။ Berlin: Verlag von Georg Reimer။ pp. vol.1: i–xxxii, 1–574, pls I–II, vol. 2: i–clx, 1–462, pls I–VIII။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပင်&oldid=531635" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၆:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။